Mpitsoa-ponenana · Avrily, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Mpitsoa-ponenana · Avrily, 2018
Tantara mikasika ny Mpitsoa-ponenana tamin'ny Avrily, 2018
Fijoroana Kiorda: Fanavaozam-baovao telo herinandro
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Avrily 2018
Ao anatin'izao vanim-potoana "iadiana amin'ny fampihorohoroana" izao, niseho imbetsaka tamin'ny efijerin'ny fahitalavitra ny voambolana fampihorohoroana. Imbetsaka ny hetsika "fampihorohoroana" no entina iadiana amin'ny "fampihorohoroana". Matetika ny governemanta no mivadika ho andrimpanjakana tsirefesimandidy sy mpamoritra, rehefa hiady amin'ny fampihorohoroana.
Ny Tontolon'ny Bilaogy Syriana, Lavitry ny Pôlitika
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana26 Avrily 2018
Hohalavirintsika ny pôlitika maloto ao Afovoany Atsinanana amin'ity herinandro ity, mba miova kely. Ary hifantoka kokoa amin'ny lafiny fiarahamonin'ny tontolon'ny bilaogy Syriana.
Miady Hevitra momba An'i Darfur: Mametraka Fanontaniana Amin'ny Ambasadera Sodaney ao Amin'ny Firenena Mikambana Ny Bilaogera
"Inona no tadiavin'i Sodàna?" "Iza no heverinao fa manome fitaovam-piadiana ho an'ny mpikomy?" Ireo fanontaniana tsotra mamitaka ireo no napetraky ny mpidinika tamin'ny hetsika Reuters Newsmaker tamin'ny ambasadera Sodaney ho an'ny Firenena Mikambana tao New York ny 24 May, 2007.
Palestina: Trano Maintso Lavitry Ny Tanindrazana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Avrily 2018
Ao amin'ity lahatsoratra ity, handre ny tantaran'ireo vehivavy roa manana fitiavana lehibe ny voajanahary isika. Masera iray nahita ny akaniny tao amin'ny zaridainan'ny tranon-drelijiosy ary renim-pianakaviana iray ao an-tanàndehibe izay nitondra ny nofinofiny momba ny zaridainan-tanàna eo an-davaragan'ny efitranony.
Ireo Ankizy Anaty Krizy Sy Ny Andraikitr'Ireo Mpanao gazety – Ambarao Ny Media Izay Eritreretinao
Ady & Fifandirana13 Avrily 2018
Aiza no toerana mampidi-doza indrindra amin'ny maha-ankizy? Raha liana ianao, tsiriho ireo vokatry ny adihevitra.
Kambôdza: Ny Aloky ny Lasa
Kambodza06 Avrily 2018
"Nitsidika firenena 60 teo eo aho nanomboka tamin'ny 1969, ary ny zavatra hitako tao Kambôdza dia ilay "tanàna mimanda" malaza any Hong Kong irery ihany angamba no afaka mifaninana aminy, Tanàna Ngazana mirefy 12 acre (148562 m²) izay rava tamin'ny taona 1999."